January | 2016 | HimiloNetwork
Zakariya January 31, 2016	Leave a comment 719 Views
Muqdisho (Himilonews) – Sayniska waxa lagu qayaxaa, waa waxqabad aqooneed oo wax ku ool ah, waxqabadkaas oo ka kooban barashada habdhiska iyo dhaqanka dabeecadeed ee shay kasta oo dunida ka jirra. Iyadoo lagu baranayo indho indhayn iyo iyo tijaabin. Saynisku waa aqoon ka dhaxaysa aadamaha oo dhan. Waana aqoontii ay iska soo dhaxleyeen illa nabi aadam csw. Waxa uu soomaray marxalado ...
Zakariya January 27, 2016	Leave a comment 449 Views
Muqdisho (Himilonews) – Nin u dhashay dalka Kambodia oo la taahaya koror culeys ku socday wajigiisa waxaa dhacda inuu helo fursadda loogu sameyn karo qalliin kadib laba dalxiisayaal ah oo ol’ole ay deeq ugu raadinayaan ka bilbaabay barta kulanka bulshada ee wajibuug. Diana Koski iyo seygeeda John Nettleton oo u dhashay dalka Australia ayaa kusoo baxay 34-jirka Vid goor ay ...
Zakariya January 27, 2016	Leave a comment 241 Views
Muqdisho (Himilonews) – Masjidkii ugu horreeyey ee laga dhiso Australia waxaa laga sameeyey gobolka Marree ee koofurta Australia sanadkii 1882-dii. Sida laga dheehan karo taariikhda, tani waxay ka dhigan tahay waa qarnigii 17aad markii ugu horreysay ee raad Islaam lagu arko dhulka Australia. Sida sawirka idin kaga muuqata, waxaa cad in Muslimiin geel dhaqato ah ay meeshan ku noolaayeen. ...
Zakariya January 27, 2016	Leave a comment 265 Views
Muqdisho (Himilonews) – Kooxda la baxday Khilaafada Islaamka ee ISIS ayaa wacad ku martay inay weeraro ku qaadi doontp dalka Spain–iyaga oo ku hal-qabsanaya: Dib ayaynu ugala wareegi doonaa gaalada dhulkeenna. Kooxdan ayaa kol horaba ku baahisay soohdimaheeda dalalka leh tirada badan ee Muslimiinta bariga dhexe. Waxay sidoo kale sii deyday shax-qariiradeed muujinaysa meelaha ay qabsan doonto sida waqooyiga Afrika ...
Zakariya January 23, 2016	Leave a comment 360 Views
Muqdisho (Himilonews) – Kooxda la baxday Khilaafada Islaamka ayaa ugu bishaareysay dadka reer Kashmiir inay ka xoreyn doonaan cadawga Lo-caabudada Hinduuga ah–oo ay maqli doonaan bogaadis iyo dhawaqyo beerka u qaboojiya, sida laga soo baahiyay. Iyada oo soo xiganaysa 13-ka qodob oo ay kooxdu ku daabacdo wargeyskeeda, Deccan Herald ayaa u qoran sidatan: “Kashmiir iyo dhulalka ku hareeran waxay hoos ...
Zakariya January 22, 2016	Leave a comment 302 Views
Muqdisho (Himilonews) – Isaga oo booqanayey macbad Yuhuuddu leedahay oo ku yaalla Roma, Pop Francis wuxuu ka hadlay qalalaasaha, dagaallada iyo fad-qalalka dunida ka jira. Wuxuu sidoo kale xusay wax uu ku sheegay “Saddexda diimood ee isku Ilaahiga ah.” “Dagaalka ninku ku qaado nin kale waa la isku maandhaafsan yahay gaar ahaan saddexda diimood ee samaawiga ah gudahooda–Islamka, Yuhuudda iyo ...
Zakariya January 22, 2016	Leave a comment 553 Views
Muqdisho (Himilonews) – Dubai waxay caan ku tahay waxyaalo badan gaar ahaan kolkay timaado in laga hadlo walxaha lagu raaxeysto. Isu-tagga Imaaraadka Carabta hadda waxay ku joogtaa booska koobaad ee jaziirad-gacan ku sameyska ugu weyn dunida, rug dukaameysi ku fadhiya wareeg dhan 3.7malyuun oo baabac ah, dhismaha ugu dheer dunida, bileyska ugu damashaadka badan iyo arrimo kale. Hayeeshe, waxa yaabka ...
Zakariya January 22, 2016	Leave a comment 341 Views
Muqdisho (Himilonews) – Nin ayaa la mooral-jabay diidis uu kala kulmay dowladda Australia oo ku aadaneyd inuu aaska u sameysto nin ay is-qabeen oo ku geeriyooday xilli ay socotay xafladdii arooskooda. Marco Bulmer-Rizzi, oo kasoo jeeda London, Ingiriiska, wuxuu la niyad-jabay markii seygiisa David Bulmer-Rizzi, oo 32-jir ah uu ku geeriyooday Adelaide xilli ay ku jireen bisha malabka. David ayaa ...
Wiil 7-jir ah oo guursaday Eey
Zakariya January 22, 2016	Leave a comment 405 Views
Muqdisho (Himilonews) – Wiil yar oo toddoba jir ah ayaa lagu jujuubay meel fagaare ah inuu ku guursado Ey dhedig ah kadib markii qoyskiisu iska dhaadhiciyeen in gabadha koobaad ee uu guursado ka dhiman doonto nasiib xumadiisa. Toddoba jirka Mukesh Kerai, oo ku nool degmada Manik Bazaar wuxuu meel fagaare ah ku guursaday Ey kadib saadaal waalidkiisu ku sheegeen inay xilli ...
Qoyska ugu weyn dalka Ingiriiska oo sugaya dhalkooda 19aad
Zakariya January 21, 2016	Leave a comment 315 Views
Muqdisho (Himilonews) – Qoyska ugu ballaaran dalka Britain ayaa ku dhawaaqay inay sugayaan dhalashada dhallaankii 19aad. Xiiso ku filnaanshaha, Sue Radford, 40, waxay go’aansatay inaanay wax badan sii dhalin kadib dhallaanka shinkiisu idlaanayo. Sue iyo seygeeda Noel, oo 45-jir ah, waxay sideed bilood kahor soo dhaweeyeen dhalashada cunuggooda ugu yar, hayeeshe, hadda waxay uurka ku sidaa mid kale. Qoyska reer ...
Haweeney – Qosolkeeda badan awgiis – Afku iskugu qabsami waayay!